QM oo war ka soo saartay dhibaatooyinkii ka dhashay roobabka Soomaaliya – news
QM oo war ka soo saartay dhibaatooyinkii ka dhashay roobabka Soomaaliya
Qoraal ka soo baxay xafiiska ayaa lagu sheegay in ku dhawaad 191,800 qof oo ku nool gudaha Soomaaliya ay saameeyn xooggan ka soo gaartay daadadka ka dhashay Roobabkii da'ay tan iyo Bishii May ee sanadkaan, kuwaas oo qaarkood ka barakay deegaannadii ay ku noolaayeen.
MUQDISHO, Soomaaliya - Xafiiska Qaramada Midoobay ee Isuduwidda Arrimaha Bani’aadannimada ee (OCHA) ayaa war kasoo saaray dhibaatooyinka ka dhashay roobabka iyo fataahadaaha ku dhuftay meelo badan oo ka mid ah Soomaaliya.
Qoraal ka soo baxay xafiiska ayaa lagu sheegay in ku dhawaad 191,800 qof oo ku nool gudaha Soomaaliya ay saameeyn xooggan ka soo gaartay daadadka ka dhashay Roobabkii da'ay tan iyo Bishii May ee sanadkaan, kuwaasoo qaarkood ka barakay deegaannadii ay ku noolaayeen.
Meelaha ugu badan ee laga barakacay ayay OCHA ku sheegtay in ay yihiin deegaanno hoos taga maamulada Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ee Koonfurta Soomaliya.
“Meelo badan oo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, roobabka Xagaaga ee socda ayaa ka culus kuwii hore, iyagoo wata dabeylo xoog leh , islamarkaana uu heerkul hooseyo," OCHA ayaa sidaasi ku sheegtay warbixinteedii ugu dambeysay.
Sidoo kale, warbixinta ayaa lagu sheegay in ku dhawaad ​​147,579 hektar oo dhul beereed ah ilaa 100 tuulo oo ka kala tirsan degmooyinka Balcad, Jowhar iyo Mahadaay ay biyaha daadadka roobka la tageen, islamarkaana ay khaaaareen dalagyo badan.
Ugu dambeyntii, Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in todobaadyada soo socdo laga cabsi qabo in ay markale da'aan roobab dabeylo wato, kuwaas oo sababi kara inuu buuxdhaafiyo Webiga kadibna markale fatahaad sameeyo.
0 Comments Topics: fatahaada webiga unsom
Askar ajnabi ah oo billad lagu siiyay howlgalka Soomaaliya
Warar 31 August 2020 18:57
Ka sokow bixinta adeegyada ilaalinta ee UN-ka, Uganda waxay leedahay Ciidamada ugu badan ee ku jira Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya [AMISOM], oo ku biirisay 6,000 oo askari.
Warar 30 August 2020 13:51
Gollaha Amaanka oo fadhi ka yeeshay Doorashadda Soomaaliya
Warar 29 August 2020 14:20